Isebenza kanjani iSkype Meet Now, enye indlela engcono kakhulu yokusondeza izingcingo zevidiyo | Izindaba zamagajethi
Isebenza kanjani iSkype Meet Now, enye indlela engcono kakhulu yokusondeza izingcingo zevidiyo
U-Ignacio Sala | | AmaSelula, Amakhompyutha, Software
Kusukela ekuqaleni kwamashumi amane, ukusetshenziswa kwe izinhlelo zokusebenza zokushaya ividiyo ngande futhi baba into esondele kakhulu ekuthintaneni ngokomzimba ukuthi singagcina uchungechunge lwethu oluthandekayo noma abangane, kanye nabantu esisebenza nabo, kubo bonke labo abake baba khona sebenze ekhaya.
WhatsApp, I-Facebook Messenger, I-Hangouts, i-Skype, i-Zoom, i-Houseparty ... ezinye zezinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu. Phakathi kwazo zonke lezi zicelo, okusetshenziswe kakhulu kule minyaka engamashumi amane kube yi-Zoom, esuke yaba nabasebenzisi abayizigidi eziyi-15 yaya ngaphezu kwezigidi ezingama-200, ukukhula uvule konke ukushiyeka kwale pulatifomu.
1 Kungani i-Zoom yathandwa?
2 Kungani i-Zoom ingasese inketho evumelekile?
3 Kuyini iSkype Meet manje?
4 Ungayenza kanjani ikholi yevidiyo usebenzisa i-Skype Meet Now
4.1 Kusuka ku-smartphone / tablet
4.2 Kusuka kukhompyutha
5 Izidingo zokufinyelela ikholi yevidiyo usebenzisa i-Meet Now
5.1 Kusuka ku-smartphone noma ithebhulethi
5.2 Kusuka kukhompyutha
6 Imihlangano Manje vs Ingxoxo Yeqembu le-Skype
Kungani i-Zoom yathandwa?
Zoom isibe isicelo esetshenziswa kakhulu ekwenzeni amakholi wevidiyo ngenxa yayo lula ukusetshenziswa, ngoba kufanele uchofoze nje kusixhumanisi ukufinyelela ikholi yevidiyo nakwalokho okunikele ukuthi abantu abangafika kwabangu-40 bangabamba iqhaza ocingweni olufanayo mahhala.
U-Eric Yuan, umsunguli we-Zoom, uthe udale le nsizakalo entsha ku- unikele ngendlela elula yokwenza izingcingo zevidiyo, ngesixhumanisi esilula, inkinga ekhuthaze ukuqhuma kwe-zoomb, lapho abantu besithathu abanesixhumanisi somhlangano wevidiyo, bejoyina futhi baqale ukubonisa izithombe zokunambitheka okungalungile, bethuka ababambiqhaza ...
Kungani i-Zoom ingasese inketho evumelekile?
Emasontweni adlule, i-Zoom ikhombisile ukuthi, ngaphezu kokuba insizakalo yokushayela ividiyo izinkampani futhi manje neyabantu ngabanye, bekubuye kube inkinga enkulu yobumfihlo babasebenzisi bayo ngenxa yamaphutha amaningi okuphepha atholakele kokubili kuzicelo zamadivayisi weselula nakuzivumelwano zokuphepha ezisetshenziselwa ukubethela ukuxhumana.
Inkinga yezokuphepha ephoqe izinkampani eziningi nezikhungo zemfundo ukuthi ziyeke ukusebenzisa le nsizakalo ngaphezu kukahulumeni waseMelika, itholakala kumakholi wevidiyo, amakholi wevidiyo abethela phakathi komthumeli nomamukeli kodwa hhayi kumaseva yenkampani, ukuze noma yimuphi umsebenzi akwazi ukufinyelela kuwo wonke amakholi evidiyo.
Inkinga ayigcini lapho, ngoba ngenxa yokungabikho kwezokuphepha kumakholi wevidiyo, ngokusho kweThe Washington Post, kwi-inthanethi singakwazi eThola izinkulungwane zokuqoshwa kwe-Zoom online ngokusesha okulula, ngoba lokhu kurekhodwe ngegama elifanayo (ngokunengqondo akuvezanga ukuthi kwenziwa kanjani), izingcingo zevidiyo noma ngubani angazilanda futhi azibuke.
Kule nkinga kufanele sengeze leyo ethulwa uhlelo lokusebenza lwe-iOS, okuyi idatha yomsebenzisi eqoqiwe nedivayisi ngokusebenzisa i-Facebook Graph API, noma singasebenzisi i-akhawunti yethu ye-Facebook ukungena ngemvume. Le nkinga ixazululwa ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kwendatshana ekhishwe yi-Motherboard ngesimemezelo salokhu kwehluleka.
Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, omunye umhlaziyi wezokuphepha wathola ukuthi isifaki seMac neWindows sisebenzisa kanjani imibhalo ngaphandle kokucela imvume kumsebenzisi. ukuthola amalungelo wohlelo lokufaka isicelo.
Uma zonke lezi zinkinga zokuphepha zingezona izizathu ezanele zokucabanga ukuyeka ukusebenzisa i-Zoom, awudingi ukuqhubeka ufunda. Kepha uma unikeza ukubaluleka kokungasese kwakho, Kusuka kwaMicrosoft basungule i-Meet Now, insizakalo esebenza ngokufana ne-Zoom, kepha ngokuvikeleka esingakulindela ku-Microsoft, osekela le sevisi.
Kuyini iSkype Meet manje?
I-Skype Hlangana Manje, yenza into efanayo naleyo iZoom esinikeza yona, kodwa ngokungafani nalokhu, ukuphepha nobumfihlo bomsebenzisi kungaphezu kokuvikelwa, ngoba yiMicrososft enkulu engale nsizakalo yale ngqalabutho yokushaya ucingo lwevidiyo. Ukufinyelela kukholi yevidiyo yeqembu, kufanele nje sifake isicelo (asidingekile kumakhompyutha) bese uchofoza kusixhumanisi.
Ngokungafani ne-Zoom, okusiphoqa ukuthi sibhalisele insiza lapho sifaka uhlelo lokusebenza kudivayisi yethu, ukusebenzisa i-Meet Now, asikho isidingo sokuvula i-akhawunti ye-Skype (Yize i-akhawunti esiyisebenzisa ku-Windows 10 ilungele thina), ngoba singasebenzisa uhlelo lokusebenza ngemodi yezivakashi.
Uma sichofoza kusixhumanisi ukujoyina ingxoxo, izosicela ukuthi singene igama lethu, ukuze ibonakale eduze kwesithombe sethu nokuthi abantu bangasibiza ngamagama ethu.
Ungayenza kanjani ikholi yevidiyo usebenzisa i-Skype Meet Now
Kusuka ku-smartphone / tablet
Njengaku-Zoom, ukudala ingqungquthela yevidiyo kuyadingeka ukuthi usebenzise uhlelo lokusebenza olusemthethweni olutholakala kuzo zombili i-iOS ne-Android, ukuze yakha igumbi lomhlangano. Umgcini kuphela okufanele ayisebenzise, ​​ngoba abanye abasebenzisi kufanele bachofoze kusixhumanisi ukuyifinyelela.
Izinyathelo okufanele zilandelwe dala ikholi yevidiyo usebenzisa i-Skype Meet Now:
Sivula uhlelo, singena kulo nge-akhawunti ye-Microsoft (leyo esiyisebenzisa nekhompyutha yethu ye-Windows 1st isebenza ngokuphelele).
Okulandelayo, sicindezela inkinobho engenhla kwesokudla yohlelo lokusebenza olumelwe ipensela elincane.
Okulandelayo, siyacindezela Reunion.
Lapho isithombe sekhamera (ngaphambili noma ngemuva uma kuyi-smartphone noma itafula) esizosisebenzisa siboniswa, chofoza ku Yabelana ngesimemo, futhi sithumela isixhumanisi kubo bonke abantu abazobamba iqhaza kukholi yevidiyo.
Abantu abathola isixhumanisi, kufanele babe nofaka uhlelo lokusebenza ngaphambilini uma kuyi-smartphone noma ithebhulethi. Ngokuchofoza kusixhumanisi, i-Skype izovuleka futhi izosibuza ukuthi sifuna ukusebenzisa njengesihambeli sohlelo lokusebenza. Sichofoza ku-Guest, bhala igama lethu bese ujoyina umhlangano / ucingo.
Uma sisebenzisa ikhompiyutha, inqubo ilula kakhulu, ngoba kufanele sikwazi ukufinyelela kufayili ye- I-Skype web ukudala imihlangano manje, ngalesi sixhumanisi, futhi ngaleyo ndlela sakhe isixhumanisi segumbi lomhlangano okufanele sihlanganyele nabo bonke abafuna noma abadinga ukufinyelela kulo, asidingi ukulanda uhlelo olutholakalayo, kungaba yiWindows. noma i-macOS, noma singakwazi ukuyenza uma sijwayele uhlelo lokusebenza.
Ukuze ukwazi ukusebenzisa isiphequluli sethu ukwenza umhlangano ngevidiyo ngeSkype, lokhu kumele kube yiChannel, I-Microsoft Edge o noma isiphi esinye isiphequluli esisuselwa ku-Chromium (Onesibindi, i-Opera, uVivaldi…).
Izidingo zokufinyelela ikholi yevidiyo usebenzisa i-Meet Now
Kusuka ku-smartphone noma ithebhulethi
Ukuze sikwazi ukusebenzisa le nsizakalo entsha yezingcingo kuyadingeka, yebo noma yebo, esinakho ufake uhlelo lwe-Skype kudivayisi yethuYebo, asidingi ukufinyelela kuhlelo lokusebenza ukubhalisa noma ukungena ngemvume nge-akhawunti yethu, uma sine-akhawunti ye-Microsoft (@outlook, @hotmail, @ msn ...)
Imfuneko kuphela yokukwazi ukufinyelela izingcingo zeqembu ezinikezwa yi-Skype nge-Meet Now, kuyefana nalapho uzidala, ukuthi isiphequluli sethu yiGoogle Chrome, Microsoft Edge noma esinye isiphequluli esisuselwe kuChromium Uma singenayo enye yalezi ziphequluli, ngokuchofoza kusixhumanisi, sinethuba lokulanda i-Skype nokuyifaka kukhompyutha yethu uma singafuni ukufaka noma yiziphi zalezi ziphequluli.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi uma ungabasebenzisi be-Windows 10 futhi unenguqulo yakamuva yalolu hlelo lokusebenza, iMicrosoft Edge esekwe kuChromium, ifakiwe natively kukhompyutha yakho.
Imihlangano Manje vs Ingxoxo Yeqembu le-Skype
Izingxoxo zeqembu le-Skype, Yizingcingo zevidiyo ebesizazi njalo kusuka ku-Skype, zenziwe zaba ngeyakho kusukela ekuqaleni, igama leqembu liyacaciswa futhi ababambiqhaza bakhethwa kusukela ekuqaleni lapho ingxoxo idalwa.
Hlangana njengengxoxo yeqembu, zingasethwa ngokushesha futhi zabelwe abanye ngezinyathelo ezimbili ezilula. Isihloko somhlangano singashintshwa ngemuva kokudala iqembu kanye nokungeza isithombe sephrofayela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amakhompyutha » Isebenza kanjani iSkype Meet Now, enye indlela engcono kakhulu yokusondeza izingcingo zevidiyo
Ukubuyekezwa kwe-SmartMike + nguSabinetek